China Screw Type Mud Valve yeAPA6A Standard fekitori uye vagadziri | Cepai
Screw Type Mud Valve yeAPA6A Yakajairwa
Standard Mud mavharuvhu zvinoenderana neAPI 6A 21th yazvino Edition, uye shandisa izvo zvakanaka zvinhu zveH2S sevhisi zvinoenderana neNACE MR0175 standard.
Chigadzirwa Chigadzirwa Chikamu: PSL1 ~ 4
Kirasi Yezvinhu: AA ~ HH
Performance Chinodiwa: PR1-PR2
Yekupisa Kirasi: LU
Mavharuvhu eMatope eECPAI, Dhizaini inovimbika yebasa rinorema rinorema mumamiriro ezvinhu ane hasha uye yakanyatsogadzirirwa izvo zvakaoma zvinodiwa zveoiri yemafuta, dhizaini yedu yedhaka vharuvhu ine chisimbiso chakapfava uye simbi kune zvivakwa zvesimbi, mbiri dhiraivha dhiraivhu, inokurumidza kuvhura nekuvhara, chisimbiso chakavimbika chinoita hupenyu hurefu hwebasa, uye bhoneti rinogona kubviswa zviri nyore kutarisa zvidimbu pane kupatsanura mativi ese evhavha. Iko kubatana CEPAI ine flange, kubatana, sikuru uye mhando yekutenderera.
Chigadzirwa Chigadziro Chikamu: PSL1 ~ 4 Chinyorwa Kirasi: AA ~ HH Performance Chinodiwa: PR1-PR2 Yekupisa Kirasi: LU
◆ Yakakwira kumanikidza kusanganisa mitsara
Pressure Yakanyanya kumanikidza kuchera system block mavharuvhu
◆ Kugadzira manifolds
◆ Kugadzira kuunganidza masisitimu • Pump Manifold block mavharuvhu
Zita Matope Valve
Muenzaniso Flange Type Mud Valve / Union Type Mud Valve / Welding Type Mud Vharuvhu / Screw Type Mud Mudhara Valve
Dzvinyiriro 2000PSI ～ 7500PSI
Dhayamita 2 "" 5 "(46mm ～ 230mm)
Kushanda Temperature -46 ℃ ～ 121 ℃ (LU Grade)
Chinyorwa Chikamu AA, BB, CC, DD, EE, FF, HH
Tsananguro Chikamu PSL1 ～ 4
Performance Chikamu PR1 ～ 2
Inoyerera slab gat e dhizaini
Gedhi rine slab rine "T" slot stem yekubatanidza inobvumira iyo gedhi kuyangarara kuchigaro ichipa yakasimba kumanikidza inopindura chisimbiso.
In-mutsetse munda kugadzirisa kugona
Iyo bhoneti inobviswa zviri nyore kune zvemukati zvikamu zvekuongorora uye / kana kutsiva pasina kubvisa vharuvhu kubva kumutsara. Iyi dhizaini inobvumidza inobvumidza inokurumidza uye yakapusa sevhisi pasina kudikanwa kweakakosha maturusi.
Inorema basa roller roller
Yakakura, inorema basa stem roller mabheyari anoderedza torque.Unique, abrasion-resistant, one piece seat design.
Chigaro chechigaro chinosanganisira maviri esimbi esimbi yekuisa / yekutsigira mhete kune iyo inoshingirira elastomer inosunganidzwa zvachose.
Iyo elastomer inopa yakavharwa yakavharwa mushure mekushandisa kwenguva refu mukuita hasha sevhisi. Mhete dzesimbi dzesimbi isingaite uye kusagadzikana kwevhu. Mhete idzi dzakanyatsogadzirirwa kuona yakasimba simba rekubatanidza kune elastomer. Iyo-chidimbu dhizaini inoita kuti kutsiva kwemunda kuve nyore.
Kukiya chigaro chakanangana
Chigaro chechigaro chakagadzirwa nesimbi "yekuvhara ganda" iyo inosungira chigaro muzasi kwevhavha. Iyi dhizaini inovimbisa chaiyo chigaro kuenderana pamwe nepashoma kuramba kuyerera.
Muviri unopfeka mhete
Kumusoro kwakaomarara chiwanikwa muviri kupfeka mhete kumashure kumusoro mativi echigaro. Aya mhete anowedzera hupenyu hwebasa revhavha nekutora erosive kusakara kunogona kukuvadza muviri kutenderedza chigaro chakatakura nharaunda.
Kukwira kwesimbi dhizaini
Iyo DM 7500 inoshandisa yakakwira stem dhizaini iyo inosarudzika uye inodzivirira tambo kubva kumutsara wepakati Iyo inokwira hunde inoratidzawo nzvimbo yemusuwo
Visual chinzvimbo chinongedzo lens
Iyo yakajeka chinzvimbo chinongedzo lens inobvumira anoshanda kuona zviri nyore kuti vharuvhu yakavhurika kana yakavharwa. Lens yekuratidzira inobatsirawo kudzivirira shinda dzedanda kubva mumamiriro ekunze.
Inogona kudzoserwa hunde kurongedza
Iko kurongedza kwehunde kunogona kutsiviwa pasina kubvisa bhoneti kubva muvharuvha (3 "- 6") nguva yekuchengetedza panogona kudiwa kuchengetedza uku (cherekedza: mutsetse uye kumanikidza kwevhavha kunofanirwa kurerutswa usati waita iyi gadziriso).
Iyo body cavity nzvimbo yakagadzirirwa kubvumira kuenderera "kuchimhanya" nekuyerera kwemvura. Ichi chiito chinodzivirira vharuvhu kubva ku "sanding up", kunyangwe mumatanho ekumira.
Pashure: Hydraulic Akavhiyiwa Gate Valve
Zvadaro: Chipenga zviviri zvekugadzira zvinoyangarara bhora vharuvhu
Vagadziri Vedare Valve Vagadziri
Kuwedzera Kuburikidza neKodhijeti Gedhi Valve yeAPA6A ...